ပွညျသူတှရေဲ့ဘဝကို ကနျြးမာရေးဝနျကွီး မွငျလှညျ့စခေငျြပါတယျ – Daily Feed MM
ပွညျသူတှရေဲ့ဘဝကို ကနျြးမာရေးဝနျကွီး မွငျလှညျ့စခေငျြပါတယျ
Admin_John | July 11, 2020 | News | No Comments
ဆေးရုံတကျတဲ့လူတိုငျးကို ဆေးရုံက ဆရာဝနျတှကေ ဆီးအဖွေ သှေးအဖွေ ဘာဖွဈဖွဈအပွငျကို သှားစဈခိုငျးတယျ။ဆေးရုံက စဈရမယျ့ဟာကို အပွငျဓါတျခှဲခနျးက စာရှကျနဲ့ ဆရာဝနျနာမညျပါထညျ့ပွီး ရေးပေးလိုကျတာ ဘာဘောလဲ..?အပွငျက ဓါတျခှဲခနျးတှနေဲ့ ဆေးရုံကတာဝနျကြ ဆရာဝနျတှနေဲ့ ဘယျလိုပါတျသကျဆကျနှယျနတောလဲ …?ဆေးရုံကဆရာဝနျတှဆေီကို အပွငျဓါတျခှဲခနျးက စာရှကျတှကေ ဘာလို့ရောကျနတော ဘယျလိုအခြိတျအဆကျ
တှရှေိနတေယျဆိုတာ ကမ်ြမာရေးဝနျကွီးဌာနအနနေဲ့ရှငျးပွဖို့အခြိနျတနျပါပွီ။..မရှိလို့ အစိုးရဆေးရုံတကျပါတယျ – လိုအပျလား မလိုအပျလား မသိရတဲ့ဆီးအဖွေ သှေးအဖွေ ကို ခဏ ခဏ စဈခိုငျးတယျ။ တနတေ့ညျးမှာတငျ ၃၀၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀၀ မက ကုနျတယျ။ နောကျရကျကတြော့လညျး ထပျစဈခိုငျးတယျ။ အဖွထှေကျလာမှ ဆေးပေးတယျ။ ဆေးစဈခကျြအဖွမေထှကျလာခငျ ဘာဆေးပေးရမယျဆိုတာ မသိဘူးပေါ့ 🙄 ။Ok ရပွီ..အဖွထှေကျလာ
မှ ဆေးကုလို့ရမယျဆိုရငျအဲ့ ဆီးအဖွေ သှေးအဖွအေတှကျ စဈပေးနိုငျတဲ့ စကျက ဆေးရုံမှာ ဘာလို့မရှိတာလဲ…?လူထုအတှကျတကယျလိုအပျနတေဲ့အရာကွီးလဘောကွောငျ့မရှိရတာလဲ ..?ဈေးကွီးလို့လား ၊ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးအနနေဲ့ budget မရှိလို့လား ၊ အပွငျဓါတျခှဲခနျးတှေ လုပျစားမရမှာစိုးလို့လား..? 🙄မရှိဆငျးရဲသားတှေ နမေကောငျးဖွဈလို့ ပူဆှေးနကွေတဲ့ စိတျညဈမှုတှေ ရှိစုမဲ့စုလေးတှေ ရောငျးခပြွီး ဆေးကုနရေတဲ့ အောကျခွလေူတနျးစား
ကော သာမနျလူတနျးစားတှကေော မနိူငျဝနျထမျးနရေတဲ့ ဆေးရုံတကျပွညျသူတှရေဲ့ ငှကွေေးကုနျကမြှုမြား စှာဖွဈစတေဲ့ ဓါတျခှဲခနျးသုံးစကျတှကေ မွနျမာပွညျရဲ့ တောကွုံ အုံကွား ဆေးရုံမဟုတျဘဲ ရနျကုနျမွို့ကွီးက အထငျကရ အစိုးရဆေးရုံတှမှော ထားဖို့ ဘာလို့မဝယျတာလဲ…?ဘာဖွဈဖွဈ အပွငျဆေးခနျးမှာပဲသှားစဈနရေတာ ဘာသဘောလဲ..? ဆေးရုံမှာ ဓါတျခှဲခနျးမရှိတာလား..? စကျမရှိတာလား..? အစိုးရက မဝယျနိုငျရငျ အပွငျက အလှူရှငျမရှိဘူးလား ..? ဘာ့ကွောငျ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက အကောငျအထညျမဖျောတာလဲ သိပါရစေ..?အရငျအစိုးရလကျထကျတော့ ထားလိုကျပါ..။အခု လူထုအစိုးရလကျထကျမှာ အကောငျအထညျ ဖျောလို့မရဘူးလား လိုအပျ
တာသာ ပွောလိုကျပါ…တတျနိုငျသလောကျထညျ့မယျ့ အလှူရှငျတှေ ပျေါလာမှာပါ။ လူထုရဲ့ မကျြရညျတစကျကို နှဈသိမျ့ပေးဖို့အတှကျ တကယျလိုအပျနတောကွီးကို အခုထိ အကောငျအထညျမဖျောနိုငျတာ အံ့သွမိတယျ။သူငယျခငျြတယောကျအမေ အသညျးအသနျဖွဈတော့ မွောကျဥက်ကလာဆေးရုံ သှားကွညျ့မိတော့လူနာမပွောနဲ့ ကိုယျတောငျ သခေငျြစိတျပေါကျသှားတယျ။ ဆီးနဲ့ သှေးကို နတေို့ငျးအပွငျဆေးခနျးကို စဈခိုငျးတယျ။ တနကေို့ ၃မြိုးလောကျစဈရတော့ဆေးစဈတဲ့ကုနျကငြှတေငျ တနကေို့ ၄၀၀၀၀ နီးပါးရှိတယျ။ အစိုးရဝနျထမျးဖွဈတဲ့ သူငယျခငျြးက မကျြရညျတရှဲရှဲပေါ့။ ဆေးရုံ ၄ရကျမှာ ၃သိနျးကြျောကုနျသှားတယျ။ အသကျထှကျခါနီးတော့ ကမြတို့
လညျးအသညျးအသနျဆေးရုံ လိုကျသှားကွညျ့တော့..လူနာက အသကျကိုမနညျးရှူနရေပွီ။ တာဝနျကဆြရာဝနျမက အသညျးအသနျ ဆီးအဖွေ သှေးအဖွကေို အတငျးသှားယူခိုငျးတယျ လူနာရှငျကလညျး ထူပူနတေော့ သှားယူရတာပေါ့ဆီးအဖွဘေဲရသေးတယျ ၊ သှေးအဖွကေ ည ၈နာရီကြျောမှရမယျတဲ့။ ယူလာတဲ့ ဆီးအဖွစောရှကျကိုတခကျြလေးတောငျ ဖတျမကွညျ့ဘူး။အဲ့ဒါကို ဘာဖွဈလို့ ဆေးအဖွသှေားယူ၊ သှေးအဖွသှေားယူ အျောနလေဲ နားမလညျ
ဘူး။လူနာက အသကျထှကျတော့မှာလေ။သသှေားရငျ အဲ့အဖွသှေားမရှေးတော့ ဓါတျခှဲခနျး က ပိုကျဆံမရမှာစိုးလို့လား။ ဘာသဘောလဲဆိုတာ တကယျကိုဝခှေဲရခကျပါတယျ။အျောဟဈငိုယိုနကွေတဲ့လူတှကေို ကနျြးမာရေးဝနျကွီးမွငျလှညျ့စခေငျြပါတယျ။ မကနျြးမာရတဲ့အထဲ ငှကေိုဘယျလို ဘယျပုံနဲ့ ဆေးကုဖို့ရှာရမှာလဲ လူတျောတျောမြားမြားက မခြောငျလညျကွဘူးလေ။ မွနျမာပွညျကလူထုက ကိုယျ့အသကျကို ဘုရားဆီဘဲ ပုံထားရတယျ။ ကံတရားရဲ့ဆုံးအဖွတျ
ကိုဘဲ ထိုငျစောငျ့နရေတယျ။ဘယျသူတကျလာလာ လှယျလှယျလေးဖွညျ့စညျးလို့ရတဲ့ဟာလညျးဖွဈမလာသေး၊ ခကျတာလညျးဖွဈမလာသေး။တကျလိုကျရတဲ့ လှတျတျော…ပွောလိုကျရတဲ့ စကားကွီး စကားကယျြ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲတှေ…
Ma Ma Htike
ဆေးရုံတက်တဲ့လူတိုင်းကို ဆေးရုံက ဆရာဝန်တွေက ဆီးအဖြေ သွေးအဖြေ ဘာဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကို သွားစစ်ခိုင်းတယ်။ဆေးရုံက စစ်ရမယ့်ဟာကို အပြင်ဓါတ်ခွဲခန်းက စာရွက်နဲ့ ဆရာဝန်နာမည်ပါထည့်ပြီး ရေးပေးလိုက်တာ ဘာဘောလဲ..?အပြင်က ဓါတ်ခွဲခန်းတွေနဲ့ ဆေးရုံကတာဝန်ကျ ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဘယ်လိုပါတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာလဲ …?ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေဆီကို အပြင်ဓါတ်ခွဲခန်းက စာရွက်တွေက ဘာလို့ရောက်နေတာ ဘယ်လိုအချိတ်အဆက်
တွေရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျမ္မာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရှင်းပြဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။..မရှိလို့ အစိုးရဆေးရုံတက်ပါတယ် – လိုအပ်လား မလိုအပ်လား မသိရတဲ့ဆီးအဖြေ သွေးအဖြေ ကို ခဏ ခဏ စစ်ခိုင်းတယ်။ တနေ့တည်းမှာတင် ၃၀၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀၀ မက ကုန်တယ်။ နောက်ရက်ကျတော့လည်း ထပ်စစ်ခိုင်းတယ်။ အဖြေထွက်လာမှ ဆေးပေးတယ်။ ဆေးစစ်ချက်အဖြေမထွက်လာခင် ဘာဆေးပေးရမယ်ဆိုတာ မသိဘူးပေါ့ 🙄 ။Ok ရပြီ..အဖြေထွက်လာ
မှ ဆေးကုလို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ ဆီးအဖြေ သွေးအဖြေအတွက် စစ်ပေးနိုင်တဲ့ စက်က ဆေးရုံမှာ ဘာလို့မရှိတာလဲ…?လူထုအတွက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာကြီးလေဘာကြောင့်မရှိရတာလဲ ..?ဈေးကြီးလို့လား ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ budget မရှိလို့လား ၊ အပြင်ဓါတ်ခွဲခန်းတွေ လုပ်စားမရမှာစိုးလို့လား..? 🙄မရှိဆင်းရဲသားတွေ နေမကောင်းဖြစ်လို့ ပူဆွေးနေကြတဲ့ စိတ်ညစ်မှုတွေ ရှိစုမဲ့စုလေးတွေ ရောင်းချပြီး ဆေးကုနေရတဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစား
ကော သာမန်လူတန်းစားတွေကော မနိူင်ဝန်ထမ်းနေရတဲ့ ဆေးရုံတက်ပြည်သူတွေရဲ့ ငွေကြေးကုန်ကျမှုများ စွာဖြစ်စေတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးစက်တွေက မြန်မာပြည်ရဲ့ တောကြုံ အုံကြား ဆေးရုံမဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့ကြီးက အထင်ကရ အစိုးရဆေးရုံတွေမှာ ထားဖို့ ဘာလို့မဝယ်တာလဲ…?ဘာဖြစ်ဖြစ် အပြင်ဆေးခန်းမှာပဲသွားစစ်နေရတာ ဘာသဘောလဲ..? ဆေးရုံမှာ ဓါတ်ခွဲခန်းမရှိတာလား..? စက်မရှိတာလား..? အစိုးရက မဝယ်နိုင်ရင် အပြင်က အလှူရှင်မရှိဘူးလား ..? ဘာ့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အကောင်အထည်မဖော်တာလဲ သိပါရစေ..?အရင်အစိုးရလက်ထက်တော့ ထားလိုက်ပါ..။အခု လူထုအစိုးရလက်ထက်မှာ အကောင်အထည် ဖော်လို့မရဘူးလား လိုအပ်
တာသာ ပြောလိုက်ပါ…တတ်နိုင်သလောက်ထည့်မယ့် အလှူရှင်တွေ ပေါ်လာမှာပါ။ လူထုရဲ့ မျက်ရည်တစက်ကို နှစ်သိမ့်ပေးဖို့အတွက် တကယ်လိုအပ်နေတာကြီးကို အခုထိ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်တာ အံ့သြမိတယ်။သူငယ်ချင်တယောက်အမေ အသည်းအသန်ဖြစ်တော့ မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံ သွားကြည့်မိတော့လူနာမပြောနဲ့ ကိုယ်တောင် သေချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ ဆီးနဲ့ သွေးကို နေ့တိုင်းအပြင်ဆေးခန်းကို စစ်ခိုင်းတယ်။ တနေ့ကို ၃မျိုးလောက်စစ်ရတော့ဆေးစစ်တဲ့ကုန်ကျငွေတင် တနေ့ကို ၄၀၀၀၀ နီးပါးရှိတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းက မျက်ရည်တရွဲရွဲပေါ့။ ဆေးရုံ ၄ရက်မှာ ၃သိန်းကျော်ကုန်သွားတယ်။ အသက်ထွက်ခါနီးတော့ ကျမတို့
လည်းအသည်းအသန်ဆေးရုံ လိုက်သွားကြည့်တော့..လူနာက အသက်ကိုမနည်းရှူနေရပြီ။ တာဝန်ကျဆရာဝန်မက အသည်းအသန် ဆီးအဖြေ သွေးအဖြေကို အတင်းသွားယူခိုင်းတယ် လူနာရှင်ကလည်း ထူပူနေတော့ သွားယူရတာပေါ့ဆီးအဖြေဘဲရသေးတယ် ၊ သွေးအဖြေက ည ၈နာရီကျော်မှရမယ်တဲ့။ ယူလာတဲ့ ဆီးအဖြေစာရွက်ကိုတချက်လေးတောင် ဖတ်မကြည့်ဘူး။အဲ့ဒါကို ဘာဖြစ်လို့ ဆေးအဖြေသွားယူ၊ သွေးအဖြေသွားယူ အော်နေလဲ နားမလည်
ဘူး။လူနာက အသက်ထွက်တော့မှာလေ။သေသွားရင် အဲ့အဖြေသွားမရွေးတော့ ဓါတ်ခွဲခန်း က ပိုက်ဆံမရမှာစိုးလို့လား။ ဘာသဘောလဲဆိုတာ တကယ်ကိုဝေခွဲရခက်ပါတယ်။အော်ဟစ်ငိုယိုနေကြတဲ့လူတွေကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမြင်လှည့်စေချင်ပါတယ်။ မကျန်းမာရတဲ့အထဲ ငွေကိုဘယ်လို ဘယ်ပုံနဲ့ ဆေးကုဖို့ရှာရမှာလဲ လူတော်တော်များများက မချောင်လည်ကြဘူးလေ။ မြန်မာပြည်ကလူထုက ကိုယ့်အသက်ကို ဘုရားဆီဘဲ ပုံထားရတယ်။ ကံတရားရဲ့ဆုံးအဖြတ်
ကိုဘဲ ထိုင်စောင့်နေရတယ်။ဘယ်သူတက်လာလာ လွယ်လွယ်လေးဖြည့်စည်းလို့ရတဲ့ဟာလည်းဖြစ်မလာသေး၊ ခက်တာလည်းဖြစ်မလာသေး။တက်လိုက်ရတဲ့ လွှတ်တော်…ပြောလိုက်ရတဲ့ စကားကြီး စကားကျယ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွေ…
ကူးစကျခံရသူ မြားထဲမှာ ၁၂၁ ယောကျဟာ ရောဂါလက်ခဏာမပွ၍ သတိထားရနျ နှိုးဆျော